Umhla My Pet » The Bedlam Farm Checklist Kuba Abalungiselela Dog Abanini
ngokuthi Jon Katz
ukubuyekezwa: Aug. 01 2020 | 7 min ukufunda
* Fumana inja ofuna.
Kakubi izilwanyana ngokubanzi, nezinja ingakumbi, kunama- nikhokelwa abanini eqonda ukuba le ndlela yokuziphatha kuphela ngokusindisa inja evela iponti, apho wayeza kuma Euthanasin. Oku kunokuba ngamava entle kumhlangula inja (yam wamhlangula umda shaggy Orson elele ngaphantsi kwedesika yam), kodwa, ezifana dog ubunini buqu, nto ngenxa wonke. Kwakhona kuba ngamava emangalisayo ukufumana inja enkulu lokumilisa olungileyo. NdineSibini kwabo, njengokuba: umntu neenkomo neegusha aze abaleke kwifama yam, kunye ezintsha, Clem, suffuses ikhaya lam kunye nobomi kunye nobuqabane emnandi. Ndiye ndincume phantse lonke ixesha umjonge. Akukho mntu nezinto uhlobo inja ukuba ufanele ukufumana, Ngokuqinisekileyo ndiya. Kufanele ukuba awugcine, ukuze ufumane enye leyo ebangela ukuba kusenokwenzeka ukuba umthande.
Kodwa ukwenza umsebenzi wakho. Nokuba uziphe, siyayazi into ethile crapshoot. Izinja bathenga nakwiivenkile yezilwanyana kusenokwenzeka kuvela ematyeni injana imisebenzi ezizalayo high-volume apho yokuzalisana idala kwaye igcine iingxaki zempilo kunye nesimo. Ngokwe zifundo zikhankanywe umhleli James Serpell kunye nogxa wakhe J. A. Jagoe kwi The Dog Domestic, izinja ziyafumaneka kwiivenkile pet kungenzeka ukuba babonise uloyiko zentlalo kunye nokuvelela-uhlobo ndlongo ngaphezu izinja ukusuka oluthile okanye kumaziko. izinja ezininzi ukuhlangulwa nekhusi nasimilo, abazenzanga yabo. Abadla baxhatshazwa, ngokwasemphefumlweni, okanye ngokuphindaphindiweyo homed ngokutsha, ukusa kwinqanaba lokuba, ngokutsho University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine, zima kakhulu kungenzeka ukuba babe neengxaki ezifana ihlafuna okungalawulekiyo, uhlaselo, zikhonkotha, kukuzingxala, noko abantu umnxeba “yokuzahlula ixhala,” ngaphezu purebreds ukusuka omlimi nomgangatho.
amaqela nokuhlangula uxanduva kunye nabasebenzi yokuhlala kuphela siyakubulela oku kodwa qiniseka abayithabathela kukuqonda oko, ukwenzela ukuba izinja musa ukubutsiba okanye, mandundu, ubunzima kakubi okanye yenzakalise abanye. Kodwa nazo ezinye abahlanguli ikuzo amkhanuke nokuzinikela ezinjaneni abasweleyo abo banomdla kakhulu ukuya izinja enogonyamelo okanye wakhathazeka emakhayeni eziqhelekileyo. Kwaye nkqu izinja ukusuka abalimi yezazela iphenjelelwa oomama kunye nabantwana, ukuze ukuba abanye yonakaliswe, ngamagwala, kunye cowering, ngoxa abanye bafunde ukuba bazive bekhuselekile kwaye sithemba. Kakhulu abalimi abanganyanisekanga okanye obawayo ubunzima-ukuvelisa izinja ngenxa yezizathu mhle okanye yorhwebo, ngaphandle ngokuphathelele ngembali yempilo okanye iyachatshazelwa. Ukususela inja indalo phantse olungakhange lubekw ngokupheleleyo nelo wonganyelwe, oorhulumente bengingqi enikwa, abantu abafuna izinja ngokwenene ngokwazo. Yiloo nto ke asiyongcamango ilungileyo ukubuza abalimi kunye namaqela nokuhlangula izingqinisiso, ukuze sibone indlela abanye izinja zabo nisebenze.
Yinto dicey ukwenza inja ukhetho isenzo yokuziphatha okanye ezopolitiko. Yazi ukuba ukhetha inja lokuhlangula, unakho kufuneka umonde ethile kunye nobuchule. izinja Uninzi baqeqeshwe okanye bahlaziywe, nokuba abaneminyaka, kodwa ukuba awukho ukulungele okanye bakwazi ukwenza ukuzibophelela guqukiyo ixesha kunye nomsebenzi, uhlobo oluthile ezahlukeneyo inja ungayithandi ngcono. Ukufumana inja purebred xa kukho izinja ezininzi abasweleyo kwimikhukhu nangoku, kwingqondo yam, enokukhethwa ngokugqibeleleyo esebenzayo, kwaye ngamanye amaxesha lowo ngcono.
* Impulsiveness utshaba lwakho lukhulu xa kuziwa ekuzalisekisweni inja ekhayeni lakho.
Thatha ixesha lakho. Musa isigqibo inja kuba wabona enye oyithandileyo kwi bonisa TV okanye ehamba phantsi esitalatweni. Okanye ukuba iniqubule abantwana bakho, okanye abazali bakho ezingenanto iimfudo, okanye ngenxa yokuba weva uhlobo smart. collies umda lumkile, kodwa izinto obungathethekiyo abaziziyatha, kufana nokuzama kwalusa iilori yenkunkuma. Inja smart akuthethi kuthi isilwanyana esikhulu, kunjalo. Mna akukho mzali okanye bulumko xa Orson bacinge ukuba ukuvula indlela ifriji ukususa lonke inkuku.
* Mus nokulindeleyo.
Ke kula ezidlalayo iiloni kwiintengiso inja-ukutya mihle, kodwa ezingang- uza kucinga inja ngokwenene. njana Real bafumane iingozi ngexesha loqeqesho nokuqhekeza, iikhaphethi impazamo iiloni, kwezetyisa izinto uyigcine. izinja Real esongwayo amaxhama USCAT aze akhwele kwi kwesingqengqelo. Bafuna izithonga waza amayeza; begula.
izinja Real lisenokungaveli kakhulu ithuba ubuse ecaleni ngenxa epakini. Ngenxa yokuba ke izinja ezininzi baqeqeshwe kakubi kangaka, benza non inja abathandi kusiba nzima. Cops lonke ilizwe bhala amatikiti abantu abahamba izinja eqatha. abanini Dog bafumane zithatyathelwe izilwanyana zabo’ ukulunywa, ucelele ukuziphatha zasuka. Iinkampani inshorensi kusiba ukhangele ukuze ubone sifuye le nja kufuneka, kwaye urhoxisele imigaqo ukuba akakwamkeli. Amanye amaqela namalungelo ezilwanyana bakholelwa izinja kufuneka banikwe isimo ngokwasemthethweni, phantse ngokulinganayo nabantu '. Abanye abantu abakholelwa kufuneka bavunyelwe ukuba “yakhe” inja onke. Kodwa Theory Rational of Dog Training ugxininisa iimfanelo kobunini.
* Kwaye ezi noxanduva kala ekwakheni.
Izinja kufuneka aphume naxa loo nto ewagalela yingqele. Kufuneka ingqalelo, uthando, nokukhuthazwa, umthambo, kwanaxa uthandana udiniwe, ndixakekile, okanye hayi kwi mood. iimfuno zabo musa esiphelisa xa ufuna lungempelaveki okanye ukuba uhlale emva kwexesha kwi-ofisi.
abathandi inja kwaziswa ukuba le ngxaki kwaye behamba nabo ahlekisayo nomonde. Ukubuyisa, befumana uthando kakhulu, ukonwaba, kunye nobuqabane. Kukho ungquzulwano kunye nemivuzo kuyo nayiphi na indlela yokwalamana, ngabantu okanye Canine. Ndiyakholwa ekuthatheni imbono elide xa kuziwa ezinjaneni. Kufuneka ukubona ngaphaya mzuzu, ingakumbi xa emhlabeni apha A.M ezintathu. dabbing kwi ikhaphethi kunye Ummangaliso Nature 's, uzama ukususa ivumba. Imboniselo elide iza kuphela ekuqondeni uhlobo kwezi zilwanyana, nokwamkela ukuba nokuba umgudu omkhulu baya kusoloko mesh neyethu.
* Balumkeleni benesizathu kakubi.
Nje elishumi edluleyo, izinja babesaqhubeka “yamkelwa,” hayi “ndayihlangula,” ede ityala kakhulu ngokweemvakalelo ingcamango. abanini Okuninzi inja kunokuba Ndinokuwabala kungoku okanye uchaze nezinja zawo ngebinzana: “Uye mhlawumbi kakubi.”Xa abuze ukuba bayazi njani, ubungqina idla -neenkcukacha, okubhetele.
Mlumkele umnqweno ukusindisa inja kuxhatshazo esona sizathu siphambili ufuna enye. Zininzi iindlela ukuvakalisa uluntu kunye novelwano, yabantu okanye izilwanyana, kodwa esi silwanyana ethile ezinambuzelayo ekhayeni lakho. Ukuba ukucengwa iinjongo zakho okanye wenze nokucingela eziphosakeleyo, nobabini niya bayachacha emva iminyaka.
Steven R. Lindsay, kwi ZakwaLizwi volume-ezimbini Handbook yakhe Applied Dog Ukuziphatha and Training, Likhangela nokucingela zenziwe malunga gadalala zokucelwa izinja. Uloyiko lonxulumano nezinye nokuphepha ukuziphatha ngamanye amaxesha ukuba aba lolu kakubi yangaphambili, Lindsay uyavuma. Kodwa abasebenzi ikhusi ayakhawuleza ukulibiza loo ngcaciso xa bengathethi abayithabathela kuba, singazi ukuba yinyaniso. “ngokungathandabuzekiyo, gadalala ngokwasemzimbeni nangokweemvakalelo kwenzeka kwaye inokuba ngunobangela yokoyika,” Lindsay ubhala. “nokuba, mhlawumbi kwenzeka ngaphantsi kakhulu kunokuba ubani esinokululindela rhoqo iingxelo ezinjalo.”
Ekubeni izinja ayikwazi esilungisa, okanye akhalaze ngabazali babo, yinto elula ukuba sicinge ukuba sele amaxhoba nenkohlakalo yabantu, ingcamango yokuba basoloko okulungene neemfuno zethu iimvakalelo kunye nembali. kodwa nemfuza, lanayo, kunye nemiqathango kwindawo yenkunkuma, phakathi kwezinye izinto, Kwakhona kakhulu ekubumbeni inja. Ngamaxesha amaninzi, siya kuze ngokwenene yinyaniso anokuba ezanelisayo ngaphantsi kwiphupha lokuhlangula. Ngaba umthanda le nja kangangoko ukuba ubusazi ukuba wayesoyika kuba yena ngokwaneleyo ngawo njengoko injana?
* Sokuthandabuza wena uze ulindele ekungathembakalini kwi abantu uzifaka inja evela.
abalimi Good yaye bakhuthele nokusindisa nekhusi abasebenzi baya kuba ebazi ngomqweno wakho ngokuba inja, ukusa kwinqanaba obnoxiousness. Baya kubuza ucwangciso lwakho, iyadi, ucingo, kids, inja-ongumnini amava kwaye kufuneka. Inyaniso, Ukuba ke abenzi njalo, thabatha oko nje umqondiso isilumkiso ukuze kuba efuna inja kwindawo engalunganga. Ngoko ke abantu abaninzi bayazi kangako malunga izinja xa ufumana esinye okanye balindele ezinjalo ngqiqweni ukuba izigidi izinja kakubi, ijikisiwe, okanye abalahlwe ngonyaka ngamnye. Abantu asasaza baye babone kakhulu, ngamanye amaxesha kakhulu. Akufuni inja ngumntu sizimisele ukunika okanye athengise enye ngaphandle ngokubuza imibuzo enzima.
* Zazi wena.
Abantu badla ityala izinja xa kuvela iingxaki, kodwa phantse lonke ityala lethu. Nokuba senza ukhetho ongathethiyo (Uhambisa huskie ukuya Condo in Boca Raton), okanye ngaba ngokwenene nalo ixesha nobuntu yokuqeqesha inja, okanye wazimela banoku-. Okunokwenzeka, kwaye uzama inja kuba udinga okanye ufuna into umthande, okanye enye into, ukuba umthande, okanye ngenxa yokuba Ndingathanda ukubuyisela izinto uyamthanda a behlayo. Akukho nto iphosakeleyo okanye ukugungqa ngaloo, kodwa ingaba inja akukho nkonzo ukucinezela okanye asinakuyikhanyela loo nto ufuna, “Ndafumana inja ukuze abantwana” okanye “Ndathi nje ukuba ukugcina yimigewu kude.”
Kwaye ukuba banqwenela ukuthanda ulibala nezinye iimpawu? Ngaba unomonde? Ingaba unayo ukunyamezela okuphezulu ngokuxokozela, isiphithiphithi, kunye nesaqunge? Ingaba umvuzo zinothi ifenitshala acocekileyo? Okanye elele emva ngeeCawa? Ngaba kunicaphukisa ngokulula? Ukufumana inja enkulu, eninzi, izigqibo ebomini-isinge ukuba iyingxaki kuwe iminyaka.
* Izinja ezingajoliswanga, khumbula. Ke musa ukucinga ngamazwi yoluntu okanye ngokwemiqathango.
Abakwazi ukubalisa amabali, ukulandela amabali, ukufunda iingqondo zethu (nangona be lalivakala iimvakalelo zethu). Abekho “abantwana uboya,” okanye bantwana konke. Sukuba simthanda ukuba ukufa, kodwa lonto ayithethi ukuba ufana nathi. Inyaniso, ezininzi abanini inja uyabathanda kuba ufana nathi. Ukuze ziyabathintela dogness wawo dlel zombini iintlobo. Ukulibala ukuba izilwanyana, iqhutywa kakhulu yiminqweno mvakalelo ngabanye kunye nokutya, isini, kunye nengqalelo, na ukutshintsha ubunyani uneendima zabo, kwaye zibeke kubo.
* Izinja zezonyango, nokuba.
ubudlelwane bakho nja iya kusenokwenzeka kuchaphazeleka zilungiswe ngayo imbali yakho nentsapho ne elidlulileyo ngokweemvakalelo, kodwa amandla inja ukuba ukuphilisa singabala ubudala okanye uzalise tshisile lilinganiselwe. Abantu baya kukuxelela ukuba izinja babo bayaziqonda zabo ingcinga kwaye wazi iimfihlelo abanayo, kodwa musa izkulahla impahla yakho ngokweemvakalelo kwi isilwanyana. Ukuba ufuna uncedo kunye neengxaki, enkulu okanye ezincinane, Yifumane. Ukuba inja yakho uyiqonda ngcono kunokuba umyeni wakho okanye inkosikazi, anike inja ithambo, ngoko uye kubona umcebisi lomtshato, okanye mncinane kakhulu kuba ezinye iingxoxo kunye neqabane lakho. Musa ukucela inja yakho ukuze wonwabe okanye zokunyanga uxinzelelo lwakho. iingcinga inja wakho mhlawumbi isekelwe xa uza ukufumana off lempundu yakho nimdlise.
* Izinja lusoloko zibonwa oomoya sagacious nemiphefumlo prescient.
Ithiyori Rational akuthethi kuthenga kuyo. Elula ubudlelwane bakho nenja, ngcono, kuba izinja ilula. Bathanda imithetho, yesiqhelo nokucacelwa, ubunkokheli, amavumba umdla, kwezinye izinja, kwaye, kanjalo, ukutya kunye nabantu abanikezela ngayo. Enye yeemfundiso Theory Rational: inja yakho crazy ngawe, kodwa yena Kwakhona bafunda ukuthanda phantse umntu ephethe hamburger.
* A lisisiseko umba indlela yam ekuphileni nezinja kukuba kufuneka ukuba esengqiqweni, thambile, nangokuyilayo, nzima ebantwini, kodwa lula izinja.
Ukulindela kakhulu wena ngokwemiqathango umonde, ukuzimisela, tshintshi. Njengoko nina, inja liza kulandela. Zama ukucinga ngokwemiqathango “kulungile” kwaye “olubi” izinja. Ezi ngcinga zabantu ukuba kungasebenzi izilwanyana. Nazi, endaweni, izinja, ukuba baqonde indlela yokuphila kwihlabathi nezinja a nga. Maxa wambi, izinja ukulunga ugonyamelo, kwemvelo eyonakeleyo, okanye kakubi ngaphaya ukulungiswa. Okuvuyisayo, bona ezinqabileyo.